Jesosy Kristy, Ilay tena mpanafaka
"Ho amin’ny fahafahana no nanafahan’i Kristy antsika." Galatiana 5:1
Tany New York, raha niditra tao amin’ny efitrano fivoriana ity evanjelista nasaina Amerikana mainty, dia nahamarika sary vongana vita tamin’ny vatososa, mampiseho olona fotsy hoditra. Gaga ilay evanjelista, ka nanontany hoe: “Hono hoy aho, iza moa io olona io?”. Nisy iray, nitsiky fatratra, namaly hoe: “Abraham Lincoln io, ilay mpanafaka ahy!”. Lincoln (1809-1865) no Filoha amerikana faha-16, nitolona hanafoana ny fanandevozana teo amin’ny taniny, tao anatin’ilay ady mangotraka nampisara-bazana ny Amerikana. Ilay olona namaly dia tsy nandalo izany ady izany ary tsy nahalala velively an’i Lincoln. Saingy fantany fa noho izy no nahazoany ny zon’olona afaka.
Amin’izao fotoana izao ny olona rehetra dia iharana fanandevozana lozan-tany mihoatra noho izany, dia ny fanandevozan’i Satana, izay tsy hay ialana samirery, noho ny fatotry ny fahotana. Amin’io fanagejana io koa, misy ny mpanafaka, dia Jesosy Kristy. Maty teo amin’ny hazofijaliana Jesosy, 2000 taona lasa izay, mba hanafaka antsika amin’ny tahotry ny fahafatesana, ary ho an’ny sasany aza, amin’ny fatotry ny herin’ny maizina. Mbola tsy teraka isika tamin’izany fotoana izany. Na izany aza anefa, amin’ny finoana, isika tsirairay dia afaka misitraka ny fanafahana nentiny. Izy irery no nahafaka antsika tamin’ny toetrantsika mpanohitra an’Andriamanitra, tamin’ny fahotantsika, ary tamin’ny fahefan’i Satana sy ny herin’ny fahafatesana.
Raha mbola tsy nandray izany fanafahana izany ianao, dia manatòna an’i Jesosy amin’izao maha ianao anao izao: apetraho aminy ny fitokisanao. Hamela ny helokao Izy, hanafaka anao amin’ny fanandevozan’ny ota, ary hanome anao fiadanana. “Raha ny Zanaka (Zanak’Andriamanitra) no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo” (Jaona 8:36).